Apple Inowedzera muIreland nemaHofisi Matsva muCork | Ndinobva mac
Apple inowedzera muIreland nemahofisi matsva muCork
Apple haisi Apple Store chete uye Apple Park. Iyo kambani inoumbwawo nevashandi vese vakapararira pasi rese uye vari mumahofisi akapihwa ekambani iyi. MuSpain, United Kingdom, United States kana Ireland. Izvo hazvina basa kuti iri kupi, asi kambani inoda mahofisi uye mamaneja anotora mutemo wemuzinda kune dzimwe nyika. Ireland ndeimwe yezvakakosha zvekambani ndosaka yakawedzera bhizinesi uye dzimbahwe. Iye zvino nehofisi nyowani muCork.
Kork, ndiro guta rechipiri rine vanhu vakawanda munyika, kuseri kweDublin, uye wechitatu pachitsuwa mushure meBelfast. Iyo yakavakirwa paRwizi Lee, iyo yechikamu chipfupi maforogo kuita maviri migero, ichigadzira chitsuwa panokwira nzvimbo yeguta. The Port of Cork ndiyo yechipiri pakukura chiteshi munyika uye imwe yemahombekombe makuru epasirese. Saka Apple yafunga zvinhu zvakawanda pakusarudza ino nzvimbo.
Sekureva kwemishumo iriko, ichagadza mahofisi matsva muchikamu chitsva chiri kuvandudzwa chiri padoko rekuchamhembe kweguta. Inofungidzirwa kuti inogona kugamuchira kutanga kusvika kune mazana mana evashandi. Chivako icho chingangodaro chiri pa # 1, Horgan's Quay ichave neanopfuura mazana matatu mazana matatu emamirimita enzvimbo akapararira pamusoro pematuriro matatu. Sekureva kweIrish Examiner, Mahofisi matsva eApple anotarisa Rwizi Lee uye achange ari padhuze nehotera nyowani. Chibvumirano cheApple chinonzi chine sarudzo dzekuwedzera kuwedzera uye chivakwa ndechekupedzisira chinopa nzvimbo dzinopfuura mazana matatu nemakumi maviri neshanu.
Ireland yakakosha kwazvo kuApple uye kunyangwe zviito zvake zvemari munyika ino zviri mumatare edzimhosva, zvinoita sekunge haasi kuzofuratira guta zvakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple inowedzera muIreland nemahofisi matsva muCork
Podcast 12x22: Zviri kumusoro kune iyo iPad
Greyhound neWolfwalkers vakasarudzwa kumubairo weBAFTA